गाई बलात्कार गर्ने पुरुष.... - Kantipath.com
गाई बलात्कार गर्ने पुरुष….
कोही मानिस कतिसम्म यौन पिपाशु हुन्छन् हँ ? हुँदाहुँदा गाईलाई पनि छाडेनन् । तर पाप धुरीबाट कराउँछ भनेझैँ गौमातालाई बलात्कार गर्ने एक पुरुषलाई पुलिसले पक्रयो र जिन्दगीभर नभुल्ने सजायँ दिलायो ।
डेलीमेलका अनुसार पुलिससँगको बयानमा उक्त पुरुषले आफूलाई जनावरसँग यौनसम्पर्क गर्ने इच्छा जागेको हुँदा इच्छा पूरा गर्न गाईलाई करणीको गरेको बताएको छ । घटना थाइल्याण्डको लाम्पांग गाउँको हो । नाम नखुलाइएका ४० वर्षका एक पुरुषलाई गाईमाथि चढेर करणी गरिरहेको अवस्थामा गाउँलेहरुले देखेछन् । त्यसपछि गाउँलेहरुले पुलिसलाई खबर गरे ।
आफू पक्राउ पर्ने सुइँको पाएपछि उक्त व्यक्ति त्यहाँबाट भाग्न थाल्यो । गाउँलेहरुले उसलाई लखेटिरहे र गाइफार्म नजिकैको बाथरुमभित्र लुकेको अवस्थामा पुलिसले उसलाई पक्रिन सफल भयो । त्यसपछि उसलाई नांगेझार पारी पुलिसको ट्रकमा हालियो । त्यसपछि उसलाई पुलिस चौकीमा लगेर सोधपुछ गरिएको थियो ।
करणी भएको गाईपालक किसान ६५ वर्षका टोंग केइ चारुनप्रासिटपोर्नले उक्त मानिस आफ्नो गाइमाथि चढेर गाईलाई बलात्कार गरिरहेको आफूले आफ्नै आँखाले देखेको बताए । त्यसपछि उक्त मानिसलाई समात्ने प्रयास गर्दा ऊ भागेको र प्रहरीलाई खबर गरी खोजी गर्दा उसलाई बाथरुमभित्र लुकेको अवस्थामा भेटिएको उनले बताए । एजेन्सी
Previous Previous post: माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न
Next Next post: हर्टअट्याक हुने ८ कारण
सलमान खान भनेपछि हुरुक्कै हुन्छिन संसारकै सबैभन्दा मोटी महिला…
रेटिकुलेटेड अजिंगरको पेटमा अकबर ….
दोहोरो अर्थ लाग्ने रोचक तस्बिरहरु
दक्षिण कोरियाको यस्तो लिंग पार्क, घुम्न आउने युवतीहरुको घुइचो
फेसबुकमा जिउँदै ‘रिप’ लेखेर एउटै डोरीमा दाई–बहिनी गरे आत्महत्या